कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा दुई दिनमा १२ सङ्क्रमितको निधन - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा दुई दिनमा १२ सङ्क्रमितको निधन
धनगढी । २७ बैशाख, २०७८
कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा भर्खरै थप एक महिलाको ज्यान गएको छ । सोमवार मात्रै अस्पतालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या छ पुगेको छ । आइतवार पनि अस्पतालमा छ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । टीकापुर अस्पतालका अनुसार अहिले भर्खरै ज्यान गुमाउनेमा टीकापुर नगरपालिका–१ की ४५ वर्षीया महिला छन् ।
योसँगै गएरातिदेखी अहिलेसम्म ज्यान जानेमा टीकापुर नगरपालिकाका ४, जानकी र बर्दगोरीया गाउँपालिकाका १-१ जना रहेका छन । अस्पतालका मेसु डा. रेमकुमार राईका अनुसार टीकापुर नगरपालिका–१ का ५१ वर्षीया महिला, ७ का ६० वर्षीया महिला र ७ कै ६७ वर्षका पुरुषको ज्यान गएको छ । त्यस्तै जानकी गाउँपालिका–१ का ५८ वर्षका पुरुष र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षका पुरुषको समेत उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ ।
उनीहरु सबैलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको मेसु डा. राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतक सबैमा स्वास प्रश्वास र फोक्सोमा समस्या देखिनुका साथै अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गएको थियो । उनीहरु मध्ये कतिपयको कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको र कतिपयको रिपोर्ट आएको छैन ।
‘रिपोर्ट आए पनि नआए पनि सबैजनामा कोरोनाको लक्षण देखिन्थ्यो’ मेसु डा. राईले भने–‘अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सबैजनामा यस्तै स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।’
अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक बढेको छ । बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पतालमा उपचार गर्न कठिनाई भैरहेको मेसु डा. राईले बताए । उनले अस्पतालको बरण्डामा राखेर बिरामीको उपचार गर्नुपरिरहेको बताए ।
उपचाररत बिरामीलाई तत्काल अक्सिजनको अभाव भएको छ । हिजो अक्सिजनको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीय अक्सिजनको व्यवस्थापनका लागि आफै अग्रसर भैरहेका छन । उनीहरुले अक्सिजन खरिदका लागि आर्थिक संकलन अभियान सुरु गरेका छन ।
अभियानमा देशविदेशमा रहेका थुप्रै व्यक्तिहरु सहभागी भैरहेका छन । अहिलेसम्म १५ लाख जति संकलन भैसकेको बताईएको छ ।
दोस्रो चरणको कोरोना फैलिएपछि टीकापुर नगरपालिकामा हालसम्म २० जनाको ज्यान गएको छ । एकपछि अर्को व्यक्तिको ज्यान जान थालेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ ।
कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने भन्दै टीकापुर अस्पतालमा स्थापना भएको आइसियु प्रयोगविहीन छन् । एनेस्थेसिया र फिजिसियनको अभावमा ७ वटा भेन्टिलेटरसहितको आइसियु प्रयोगविहीन भएका हुन् ।
अस्पतालले लामो समयदेखि एनेस्थेसिया र फिजिसियनको माग गर्दै आएको भए पनि व्यवस्था हुन नसक्दा आइसियुमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमित उपचार नपाएर ज्यान गुमाइ रहेका छन् । अस्पतालले हाल २० शय्याको एचडियु (उच्च उपचार कक्ष) स्थापना गरेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको छ ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक रावलले जनशक्तिको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको बताए । ‘गत वर्षदेखि नै एनेस्थेसिया माग्दै आएका छौं, आफू पनि खोजिरहेका छौं तर पाउन सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकारमा कुरा गर्दा पनि अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’ अध्यक्ष रावलले अस्पतालमा भएका पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने जनशक्ति नहुँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको गुनासो गरे ।
कैलालीको पूर्वी भेगका टीकापुर, लम्कीचुहा र भजनी नगरपालिकाका साथै जानकी, जोशीपुर, बर्दगोरिया, मोहन्याल गाउँपालिका र छिमेकी बर्दिया जिल्लाको पश्चिमी भेगका पालिकाका बासिन्दाले उपचार सेवा लिँदै आएको यो अस्पतालले विगत लामो समयदेखि नै जनशक्ति अभाव भोग्दै आएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, वैशाख २७ २०७८ १६:५७:२४